DEG DEG: Andrè Silva oo berri caafimaadka u maraya AC Milan (Daawo xirfaddiisa) – Gool FM
(Milanello) 11 Juunyo 2017 – Waxaa kulan hadda guul kusoo dhamaaday kulan qarsoodi ahaa oo ay gadaal ka ogaatey warbaahintu kaasoo qabsoomay xerada tababarka Milanello, una dhexeeyay maareeyaha ciyaaraha ee Massimiliano Mirabelli, iyo xoghayaha fulinta ee Fassone.
Waxaa markii hore soo baxayay war sheegayay inay la kulansan yihiin wakiilka Andrè Silva ee Jorge Mendes, yeelkeede, waxaa gadaal kasoo baxday inuu kulanka sidoo kale fadhiyo isla laacibka Silva.
Kulanka oo bilowday 21:20 xilliga Talyaaniga ayaa sida la sheegayo lagu guulaystey wuxuuna MilanNews.it ku darayaa inuuba laacibku berri caafimaadka ku mari doono La Madonnina, wixii kasoo kordhase waan idinla socodsiin doonnaa insha ALLE.
Laacibka ayaa ku imanaya lacag gaaraysa €38m ilaa €40 milyan oo euro, isagoo berri marka ay saacadda Talyaanigu tahay 7:30 caafimaadka ku maraya Clinica La Modonnina, kahor inta aan si rasmi ah loo shaacinin heshiiska isagoo noqon doona laacibkii 4-aad ee Milan kusoo biira xagaagan oo uusan weli furmin suuq-xagaagii.
Andrè Silva oo 21-jir ah ayaa ah laacib door kasta oo weerarka ah ka dheeli kara, wuxuuna fasalkii dhamaaday kooxdiisa u dhaliyay 21 gool, halka uu Portugal 7 gool u saxiixay 8 kulan.
DAAHA LAGA ROGAY: Xiddigaha reer Spain ee Morata ku qal qaaliyey in uu doorto United